musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta inowedzera pamusoro pe100 ndege itsva kubva kuNew York
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Delta inowedzera pamusoro pe100 ndege itsva kubva kuNew York.
Kuwedzera kweDelta Air Lines kunodzoreredza kusamira kumisika makumi mana ekuUS kubva kuNew York's JFK neLaGuardia airport.
Delta Mhepo Lines iri kuwedzera pamusoro peanopfuura zana ezendege mazuva ese muNYC kudonha uku - 100% yekuwedzera huwandu kana ichienzaniswa nezhizha 25.
Delta Mhepo Lines iri kudzoreredza basa risingamire kune New York City yepamusoro makumi mana emisika misika.
JFK uye LGA's hombe carrier inoshanda anopfuura mazana mana ezuva nezuva nendege kuenda kunzvimbo makumi mapfumbamwe nembiri.
Mushure mekupisa kwezhizha, Delta Air Lines haisi kunonoka kudzosa dzimwe ndege nenzvimbo dzebhizinesi reNew York uye vafambi vezororo zvakafanana.
Pakazosvika November, Delta Air ichawedzera zvinopfuura zana zvemazuva ese ekubva kubva John F. Kennedy Airport neLaGuardia Airport zvichienzaniswa nehurongwa hwekambani yendege yezhizha ra2021 - ichiturikira kune zvigaro zvingangosvika zviuru zvisere zuva rega rega kuvanhu nenzvimbo dzinonyanya kudiwa neNew Yorkers.
Nedzimba dzevatengi dzinodzokera kumazinga e2019, Delta Air yakatarisana nekudzoreredza simba zvakachengeteka uye nekuvimbika sezvo rwendo rwebhizinesi ruchikwira nemavhoriyamu asati aonekwa kubva pakatanga denda.
"Tiri kuwedzera mamwe makumi maviri neshanu muzana kudonha uku kusangana nezvinodiwa zvakanyanya zvebhizimusi nekufamba kwenyika kuenda mugore rinouya," akadaro Joe Esposito, SVP yeDelta - Network Planning. "Tinoramba tichipa mamwe sarudzo uye nyore tichivakazve kubatana kwedu kwepasirese uye kuendesa izvo Delta inonyanya kuita - kuisa vatengi vedu pamberi neyakasiyana, yakavimbika sevhisi uye yekutanga yekufambisa ruzivo."
Haisi chete iyo Delta ichadzorera isingamire sevhisi kune ese eNew York's makumi mana anonyanya kufarirwa misika yepamba panosvika mwedzi unouya, asi akawanda makiyi misika yemabhizinesi achaonawo kukwidziridzwa kwesarudzo dzendege, kusanganisira Boston (BOS), Washington, DC (DCA), Raleigh- Durham (RDU) uye Charlotte (CLT). Izvi zvinotevera basa reDelta rakatowedzerwa kumisika mikuru yemakambani NYC pakutanga kudonha uku, seChicago (ORD), Dallas / Ft. Worth (DFW) neHouston (IAH) - chikamu cheDelta yekufunga nzira yekuwedzera huwandu hunoenderana nekudzoka kwekuda.
Delta zvakare ichangobva kuvhura sevhisi nyowani yeLGA kuenda kuToronto (YYZ) uye ichatangisa ndege nyowani kuenda kuWorcester, Massachusetts (ORH) kutanga Mbudzi 1.
Delta ichapa ndege dzakawanda uye zvigaro zvechero mutakuri paJFK neLGA nemazana mana ekufamba zuva nezuva kuenda kunzvimbo makumi mapfumbamwe nembiri dzekumba nekune dzimwe nyika. Uye yese Delta ndege pa JFK, LGA neEWR zvino zvichapa ruzivo rweChikoro Chekutanga, nekuda kwekubviswa kwediki, ndege dzezvigaro makumi mashanu kubva kumisika yose yeNYC.
Delta yakawedzerawo ndege dzayo dzeAirbus A220 muNew York, zvichifambirana nekuwedzera kwakafanana panzvimbo yedu iri kukurumidza kukura yeBoston hub, kuenda kuChicago (ORD), Dallas/Ft. Yakakodzera (DFW) uye Houston (IAH). Iyo A220 inopa vatengi mukana wakapamhama, wechimanjemanje uye wakapamhama Main Cabin zvigaro muboka redu rengarava, mabhini epamusoro-soro uye mahwindo makuru.
Sezvo mwaka wezororo wezororo unoswedera uye US yaverenga kusimudzwa kwekurambidzwa kwekufamba kune vachengetwa vashanyi vekunze, Delta ichawedzera imwe sevhisi yeNew York kunzvimbo yayo yepasi rose pakupera kwa2021.
Mhiri kweAtlantic, Delta inoshanda kusvika gumi neshanu nendege mazuva ese kuenda kunzvimbo gumi nenomwe muna Zvita.
Delta ichapeta ndege mbiri kuenda kuParis (CDG) neLondon (LHR) kusvika kaviri pazuva pamwe nekuwedzera sevhisi zuva nezuva kuDublin (DUB) kutanga Zvita 6.
Pazororo rechando, Delta ichatanga rwendo rwechipiri zuva nezuva kuenda kuTel Aviv (TLV) kutanga Zvita 18 uye kudzosa ndege dzakananga kuLagos (LOS) katatu pasvondo musi waZvita 7.
Pamusoro pezvo, Delta ichadzoreredza nonstop service kuFrankfurt (FRA) muna Zvita 13, iyo yakapedzisira kushanda munaKurume 2020.
KuLatin America neCaribbean, Delta ichashanda pamusoro pemakumi maviri ezuva nezuva nendege kuenda kunzvimbo gumi nesere, kudzoreredza huwandu kune angangoita makumi masere neshanu muzana e pre-denda mazinga.
Kune avo vari kutsvaga pekupotera kunodziya, Delta ichatangazve sevhisi kuSão Paulo (GRU) neLos Cabos (SJD) musi wa19 Zvita, pamwe nekuwedzera sevhisi kuSt. Thomas (STT) neSt. Martin (SXM) musi wa18 Zvita. .
Delta ichatangisawo sevhisi nyowani kubva kuJFK kuenda kuPanama City, Panama (PTY), muna Zvita 20.